Pịa na mba ndị dị na map iji gụọ akụkọ banyere okporo ígwè, okporo ụzọ na eriri na mba ndị dị na Europe!
Mayor Yılmaz Büyükerşen na ndị isi obodo nke gara Germany maka ọgbakọ egwuregwu bọọlụ nke obodo nke Frankfurt guzobere, sonyere na mmemme mmalite nke metro ahụ nwere ọhụụ mara mma nke Eskişehir. Ngwa a maka nkwalite Eskisehir [More ...]
Volkswagen, ezinụlọ nlereanya nke SUV nke ndị otu na-aga nke ọma na T-Roc, ụdị Cabriolet nke Frankfurt Motor Show maka oge mbụ (IAA) na-akwado iwebata. Site na ngosipụta ụwa nke T-Roc Cabriolet, Volkswagen weta ọhụụ ọzọ na klas SUV. Nke mbu, 12-22 [More ...]
Nchaji nke okporo ụzọ nke na-ejikọ Kosovo na Albania adọtala mmeghachi omume dị ukwuu site na Kosovo na ụmụ amaala Albanian. Agbanyeghị, okporo ụzọ dị na Kosovo ga-akwụ ụgwọ ma emechaa. Onye osote onyeisiala Rexhep Kadriu kwupụtara na okporo ụzọ ndị dị na Kosovo ga-anata ụgwọ ma emesịa. [More ...]
Bosch na-akpụ akpụ Mmegharị Ọhụụ na Ọdịnihu
Stuttgart na Frankfurt, Germany - Bosch gbara mbọ na-emegharị ngagharị dịka enweghị nchekwa, nchekwa na-adọrọ adọrọ dịka o kwere omume. Na IAA 2019, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịhazi onwe ya, nke nwere onwe ya, ịkparịta ụka n'igwe na ngagharị. [More ...]
Ndụmọdụ maka njem dị mfe na nke bara uru karịa Pirelli
Onye isi taya nke Pirelli nke tiretali, tupu ncheta ezumike ezumike na ncheta ọkụ na-eche ndị ọkwọ ụgbọala. Karịsịa n'ihi nrụgide ikuku na-ezighi ezi na taya, belata omimi tread, taya ndị agadi na nke siri ike [More ...]
Ihe osise Kalịnda Xire nke Pirelli nke Oge mbu Ihe ngosi nke ihe ngosi nke 2020 nke akụkọ Pirelli na kalenda a na-atụ anya ya nke ọma, onye foto Italy Paolo Roversi kwadebere. Isi okwu 2020 [More ...]
Oge mbu nke 6 nke 133 nke ugbo ugbo site na Porsche AG
Porsche AG mụbara ego ahịa ahịa ụwa niile site na 2019 na ọnwa isii mbụ nke 9. Porsche AG kwupụtara nsonaazụ ego ọnwa isii mbụ maka afọ 2019. Azụ ahịa ahịa nke Porsche mụbara site na 9 pasent [More ...]
'2019 Grand Prix nke Hungary'
Imirikiti ndị ọkwọ ụgbọ ala abanyela ọrụ ha; Hungaroring nwere ọtụtụ ụzọ dị nkọ n'akụkụ Budapest na-echetara gị ụbọchị ndị ahụ n'ihi na ọ bụ ụzọ kachasị ala na-agbacha ọsọ. Agbanyeghị, nke a apụtaghị ịdị mma na usoro nke taya [More ...]
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na Spain
NUMgbọ okporo ígwè 700 gbadara mba niile n'ihi ogbugbu akpọrọ General Laboal Confederation (CGT) na Spain, ndị ọrụ ụgbọ okporo ụzọ otu a enwetaghị nsonaazụ site na mkparita uka dị n'etiti Razọ Spanishgbọ okporo ígwè Spain (RENFE) na General Trade Confederation (CGT) [More ...]
Afọ 125 na Egwuregwu moto
Ndị otu Mercedes-AMG Petronas Motorsports mere ememe afọ 125 ha na motorsport na agbụrụ 1 na Formula 200. Mercedes-AMG Petronas [More ...]
Bursa Business World na-aga n'ihu iji BTSO mepee Worldwa
Urslọ azụmahịa na ụlọ ọrụ Bursa na-aga n'ihu na-ewetara ndị otu ya mmemme nke mba ụwa na Fairlọ Ọrụ Mgbasa Ọchịchị Ndị Niile na Mmekọrịta Mba Nile (UR-GE). N'ime oke ọrụ ndị a kpọtụrụ aha, ụlọ ọrụ sitere na Bursa anọwo na Germany, Russia na France n'ime otu ọnwa gara aga. [More ...]
A ga-eme ka nchekwa na ọdụ ụgbọ oloko dị na Germany
Mgbe ọnwụ nke nwatakịrị dị afọ 8 dị na Frankfurt na ụzọ, Mịnịsta ime obodo Seehofer kwupụtara na a ga-eme ka nchekwa na ọdụ ụgbọ okporo ụzọ ka mma. Onye Mịnịsta ime ime German Horst Seehofer mgbe a gbasasịrị nwata nwoke dị afọ 8 na egwu dị na Frankfurt Main Station. [More ...]
Ndị ọrụ Rhomberg SERSA Rail Group na-enweta Ọzụzụ Drone
Employeesfọdụ ndị ọrụ Rhomberg SERSA Rail Group sonyere na ọzụzụ drone nke SBB. Courselọ akwụkwọ ahụ na-enye usoro iwu na teknụzụ maka ụgbọ elu, drone na usoro nchebe maka ụgbọ elu ikuku na-enweghị ike. Na-ese foto saịtị ndị a na-ewu ihe na iji Photogrammetry [More ...]
Mbupu XillionX Euro Trams si Bozankaya gaa Romania
Edere nkwekọrịta a n'etiti Bozankaya na Munista Timişoara maka nkwekọrịta nke nde euro 16 maka ịnye ụgbọ ala dị ala nke 33. Nzipu mbu ga ebido n’ime ọnwa 18 na oge nkwekọrịta a ga-agwụcha n’onwa 48. Bozankaya ga - ewepụta trams 30 [More ...]
Anakwere Mbara ilzọ ilgbọ Italytali
Anakwere Mbara Razọ Ratali Italytali. Kọmitii Atụmatụ Akụ na ụba Economictali (CIPE) 24 nakweere 28 ijeri euro okporo ụzọ okporo ụzọ maka FS Italiane na July. Ego ndị ọzọ maka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè maka Italiantali RFI, ihe ruru ijeri EUR 15, 2017-2021 [More ...]
Ihe omume dị egwu na ọdụ ụgbọ oloko Frankfurt!
N'ọdụ ụgbọ oloko Frankfurt dị na Germany, nwa nwoke dị afọ 40 kpaliri nwa nwoke dị afọ 8 na nne ya n'ihu ụgbọ elu. Mgbe a kpọgara nne n'ụlọ ọgwụ nwere mmerụ ahụ, nwatakịrị ahụ nwụrụ. Otu nwoke yi uwe ojii na Frankfurt Central Station [More ...]
27 July Na 2019, Keolis, nke na-arụ ọrụ usoro njem njem ọha na Twisto, enyela Caen la Mer usoro ụgbọ mmiri ọhụrụ na Normandy ugwu. Ka ọnwa gachara, usoro ụgbọ ala ọhụrụ a ga - anọchi usoro eji ebula rọba. tram [More ...]
Mkpesa Tragbọ Okporo Ọgba Dị Elu na .tali
N'Itali, puku kwuru puku mmadụ mere ihe mgbe gọọmentị mechara nye ọkụ n ’ọkụ ụgbọ elu a na-agba nnukwu ọsọ ọsọ, nke nọ na-arụ kemgbe ọtụtụ afọ n’etiti Turin na Lyon, France. ihe owuwu n’etiti Turin, andtali na Lyon, France ruo ọtụtụ afọ [More ...]
Ntinye ego nke 86 maka ego ụzọ ụgbọ oloko German R Railway
Germany na-ezube itinye ego ijeri euro ijeri 86 maka arụmọrụ mmezigharị ụgbọ okporo ígwè kachasị na akụkọ ihe mere eme ya. N'ime afọ iri na-abịanụ, a na-eme atụmatụ itinye karịa ijeri 86 ijeri maka ịgbatị ụgbọ okporo ígwè na Germany. Ọchịchị German, afọ 10 na-esote [More ...]
33 Nde Euro Tram na-ebupụ site na Bozankaya Ka Romania
Turkey mbụ okporo ígwè ụgbọala ekspootu ka Bozanka, Total 16 100% maka Romanian obodo nke Timişoara ga-emepụta ala-n'ala trams. Site na nhọrọ 24 ọzọ, a ga-atụle usoro ahụ ka ọ bụrụ 40. Ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè na Ankara [More ...]
ÖBB na-eme Nnwale Nlekọta ngwakọ ngwakọ
ÖBB na Siemens Mobility ejirila ụdị ụgbọ mmiri Cityjet eco nwere batrị electro ngwakọ iji nyochaa ike ụgbọ oloko ngwakọ na Austria. A nwalere ụgbọ okporo ọkụ eletriki na ụzọ okporo ụzọ nke Almtalder Donauufer, Mattigtalbahn na Rieder Kreuz. a [More ...]
Ndị Krizevci 2 ndị na-akwụ ụgwọ na-enye onyinye maka ụzọ ụgbọ oloko Hungary
HŽ Infrastruktura kwupụtara na ụlọ ọrụ iri na consortia edobere nkwekọrịta nkwekọrịta 42.6 nde maka oge ọgbara ọhụrụ nke Krizevci-Koprivnica-Hungary larịị ụzọ okporo ụzọ. Krizevci - Koprivnica - Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ Hungary, na Croatia [More ...]
Ụgbọ njem ndị njem na-adọkpụ na Ukrainian njem na VIP Wagon
Razọ ụgbọ oloko nke Ukraine “Ukrzaliznytsya VIP na-agbakwunye ụgbọ ala VIP na ọnụ ọgụgụ ahụ“ 29 ine na ụgbọ oloko Kiev-Uzhgorod 30 / 0. Roomslọ ndị dị n'ụgbọ a ga-asa ahụ, TV na akwa abụọ. Traingbọ okporo ígwè ahụ ga-apụ na Kiev site na August ruo 2 - n'ime ụbọchị abụọ, na-ahapụ Uzhgorod. [More ...]
Ụlọ ọrụ China na-ewu Ọdụ Osimiri okporo ụzọ Submarine n'etiti Tallinn-Helsinki
Ebe ntinye n '100 nke Tallinn-Helsinki ejiri mara abuo na China Railways International Group (CRIG), China Railway Engineering Company (CREC), China Communications Construction Company (CCCC) na ego Touchstone Capital Partners (TCP) dika akuku nke oru mmepe nke Finest Bay [More ...]
British Railway Company 1 Million Pound Negligence Penalty
Na United Kingdom, ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Govia Thameslink Railway kwụsịrị £ 2016 nde (24 nde TL) n'August 1, na-ekwu na otu nwa okorobịa 7 bụ Simon Brown gbatịa isi ya na windo ụgbọ oloko ahụ. Ụlọikpe, Gatwick Airport na isi obodo London [More ...]
Ọganihu Na-amalite Production nke Teknụzụ, Ụdị nke Ngosi Ngosipụta Frankfurt
Tupu Ngosipụta Frankfurt Motor (IAA) na Frankfurt na September, 2019 ga-ewebata ọtụtụ ihe ọhụrụ na-egosipụta isi atọ kachasị elu nke nzuko ụlọ ọrụ ahụ na okwu bụ "Mbugharị bụ Rhythm of Life Continental. Onye isi oche nke Board Elmar Degenhart [More ...]
Lewis Hamilton enweta nnukwu Britain Grand Prix
Lewis Hamilton meriri Great Britain Grand Prix maka oge nke isii n'ụlọ ya, na-egosi mmeri a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ya mere, o mere aha ya n'etiti akụkọ ifo. Enyocha Energy [More ...]
Na-akpata Mberede na France, 4 Nwụrụ Anwụ 4
Egburu 4 na ndị 4 merụrụ ahụ na ụgbọ okporo ígwè na-agafe na Avenay-Val-d'or obodo Marne nke dị n'ebe ugwu nke France. Zụọnụ n'obodo Avenay-Val-d'or na mpaghara Reims nke dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke France, jikọtara ụgbọala. French French [More ...]